Masuuliyiin sare oo Socialdemokrati ah: xariga ha loo jaro MP - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Stefan Löfven ra'iisalwasaraaha sa Sweden ahna hogaamiyaha xisbiga Socialdemokraterna. Foto:TT
Wadoshaqeyn dhex marta garabyada siyaasadda
La daabacay fredag 12 december 2014 kl 13.52
Waxaa soo xoogeysnaya dalabyada ah in xisbiga Socialdemokraterna - olalaha doorashada ee dhawaan billaabanaya - xariga u jaro xisbiga ay xukun wadaaga yahiin ee Miljöpartiet. Waxaa qalad ah in horey loo sii galo heshiis xukun wadaag ah iyada oo aan laga warqabin sida ay noqoneyso natiijada doorashaada la qabanayo bisha mars, sidaas waxaa qaba masuuliyiin sare oo ka tirsan xisbiga Socialdemookraterna oo laanta Ekot la xiriirtay.
Niklas Karlsson, waa guddoomiyaha laanta Skånes ee xisbiga Socialdemokraterna xubinna ka ah golaha dhaxe ee xisbiga. Waxaa qabaa in xisbiga Miljöpatiet aysan aheyn in la siiyo darajo gooni ah, ayuu yeri.
- Waxaan qabaa in aan ka digtoonaano in aan isku xirno isbaheysiyo kalo gedisan, balse waxaan qabaa in olalaheena doorashada ku soo bandhigno waxa xisbigeena siyaasadiisa ay tahay, iskuna taxluujino sidaan taageero ugu heli laheyn middas. Ka dib marka ay codbixiyaasha wax kalo go’aamiyaan oo ay natiijada dooorashada la helo 23ka mars markaas la galo isbaheysiyada suurtogalka ah. Taasna waxay u taalaa in ay ka miro dhaliyaan xisbiyada dalka., ayuu yeri.
Markii doorashadii september dhacdey billaaban rabtay ayaa Löfven ku tilmaamey xisbiga Miljöpartiet xisbiga ugu haboon oo ay wadoshaqeyn karaan. Doorashadii ka dibna labada xisbi ayaa noqdey xukun dawaag. Maalinkii shalay aheyd ayaa guddoomiyaha ururka weynaha kulmiya ururada shaqalaa LO Karl-Petter Thorwaldsson sheegay in ay haboon tahay in Socialdemokraterna xariga u jara Miljöpartiet.
Stefan Löfven ayaa asagu sheegay in aysan jirin qorsho xisbigiisa xariga ugu jarayo wadoshaqeynta Miljöpartiet. In kastoo uu sheegay in xisbigiisa olalaha doorashada u gooni ahaaneyso.
Marar badan ayaan sheegnay in aan nahay labo xisbi oo kalo gedisan, doorashadan midba goonisdiisa u galayo. Qof welibana ay asaga u taalo xisbiga uu codka siinaya. Haddi annaga codka nala siiyo dabcan taageeradeena ayaa kordheysa , laakiin sidaan horeyba doorashadii hore u sheegnayba, diyaar ayaan u nahay wado shaqey dhex marta garabyada kalo gedisan ee siyaasadda, ayuu yeri ra’iisalwasaare Stefan Löfven.
Tass waxay ka micno tahay in aysan maanta cadeyn heshiiska miisaniyadeed ee ay galaan xisbiyada casaan caargar – waa Socialdemokraterna, Miljöpartiet iyo Vänsterpartiet, ahaan doonta ballan qaad ay wadojir ugu galaan olalha doorashada.
Tusaale hesiiska wadoshaqeyn oo dhanka tamarta ah oo ay xisbiyadaan horey u gaareen ayaa sidoo sheegay Stefan Löfven ahaan doonta mid sii jiri doonta, waayo buu yeri waxaan loo baahan yahay arrimahan in is afgarad ka gaaraan dhamaan garabyada xisbiyada.
Löfven ayaa sidoo kale sheegay in hesiiska miisaniyadeed ee ay galeen xisbiyada casaan cagaar uusan sidoo kale ahaan doonin mid sii jiri doona.
- Siyaasadan damacsaneyn in aan meel marino, waa la ridey. Laakiin taas micnaheeda ma ahan in aan siyaasadas ka beyrayo, balse waxay ugu dhalisey in aan di buga fikaro waxaan sameyneyno inta ka dhiman sannadka 2015ka iyada oo laga doolayo sida ay u egyahiiin fursadaha jira, ka dibna waxaan ka arki doonaa sidaan middas wax uga dhabeyn karno sannadyada 2016,2017,2018ka, ayuu yeri Löfven.
Maadaama miisaaniyadii ay wado jir u soo dhigeen xisbiyada alliansen noqotay midda meelmartay, ayey ahaan doonta midda dalka lagu dhaqayo sannadka 2015ka.
Dhanka kale masuuliyiin sare oo ka trisan xisbiga Socialdemokraterna ay oo laanta Ekot la xiriirtay ayaa ayagana muujiyey in aysan doonaynin in si cad loo yiraahdo halkeeda ayey ka sii soconaysaa wadoshaqeynta Socialdemokraterna iyo Miljöpartiet inta lagu jiro olalaha doorashada. Masuuliyiintan waxay ka cabsi qabaan in middas caqabad ku noqoto wadoshaqeyn dher marta garabyada kalo gedisan ee siyaasadda, ka dib natiijada doorashada mars. Golaha dhexe ee xisbiga Socialdemokraterna ayaa maanta kulmaya waxaana la filayaa in arrintan laysku soo qaado.
Soomaalida u Sharaxan Doorashada 2014